Ule Ule Ugbo UK | Cargbọ M Mbubata
A ụba nke ahụmahụ modifying dị ugbo ala maka nnabata…
My Car Bubata bụ ndị isi na nnwale ụgbọ ala UK na ọrụ ndebanye aha maka ụgbọ ala Europe na European. Anyị nwere ike gbanwee ụgbọ gị n'ụzọ kwekọrọ na iwu na iwu UK.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nyocha IVA / MOT na saịtị ma ndị DVSA nwere ikike zuru oke iji mepụta nnwale ụgbọ. Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị adịla na UK mana anaghị agbaso iwu UK maka ndebanye aha, anyị nwere obi ụtọ inye aka na imezi ụgbọ ala gị ka ọ kwenye, yana ịme ule gị.
Ndị otu anyị nwere ọtụtụ ọrụ na ọtụtụ akụrụngwa na-ahụ na ụgbọ ala gị batara dị mma ma dị njikere maka okporo ụzọ UK.
Ndị otu ule anyị nwere ọtụtụ iri afọ jikọtara ahụmịhe ha abụọ na-akwadebe ụgbọ ala maka ule IVA / MOT na ule IVA / MOT n'onwe ya. Anyị ga-arụ ọrụ mgbe niile ịchekwa ụgbọ gị ka ọ dị nso na nkọwapụta nke onye nrụpụta.
Ọ bụrụ na ị na-ebubata ụgbọ ala na Europe, anyị ga-arụ ọrụ iji nweta Asambodo Nkwekorita (ma ọ bụrụ na ịnwebeghị otu). Akwụkwọ a ga-akọwazi mgbanwe ndị dị mkpa iji kwekọọ na iwu ndebanye aha okporo ụzọ UK. Nke a na-agụnyekarị ọkụ ihu, ọsọ ọsọ na ngbanwe ọkụ ọkụ n 'azụ. Anyị nwere ike ijikwa ihe niile edepụtara maka usoro ịdebanye aha ụgbọ ala UK gị site na usoro nnabata, na ngwa mbubata V55.
Maka ụgbọ ala ndị si na mpụga Europe pụta, anyị ga-emezigharị ihe niile na nyocha IVA dị mkpa.
Cheta, gọọmentị UK na-agbasi mbọ ike na ijide n'aka na ụgbọ ala ndị ọzọ dị na UK maka ihe karịrị ọnwa 6 ma edebanyebeghị aha ha na-agafe mgbanwe na ule dị mkpa. Nweta okwu si n'aka anyị n'okpuru iji hụ na ụgbọ ala gị na-agbaso iwu ndebanye aha okporo ụzọ UK.